Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geerida malaaq Xasan Cumar – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geerida malaaq Xasan Cumar
March 18, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada iyo Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, geerida ku timid, Alle ha u naxariistee Malaaq Xasan Cumar Xasan oo ku geeriyoodey magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa tilmaamay doorkii uu ku lahaa Marxuumku dhismaha dowladnimada, xasilloonida dalka, dib u heshiisiinta bulshada iyo dhammaan dadaalladii geeddi socodka nabadda ee xal u raadinta dhibaatooyinka dalkeenna ka dhacay.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Alle ha u naxariistee Malaaq Xasan Cumar Xasan Ibraahim oo ka mid ahaa tiirarka dhaqanka bulshada Soomaaliyeed oo caawa ku geeriyooday magaalada Baydhabo. Malaaqu waxa uu ka mid ahaa tiirarka nabadda iyo dhaqanka ee bulshada Soomaaliyeed. Marxuumku waxa uu qayb ka ahaa dadaalladii dowlad dhiska iyo nabadaynta Dalkeenna.”
Golaha Badbaadada Qaranka oo maanta loogaga dhawaaqay magaalada Muqdisho